Faly izahay miara-miasa, ary manohana ny sakaizanay Strive Masiyiwa izay notendrena ho iraky ny Vondrona Afrikanina manokana hanentanana ny valin’ny sehatra tsy miankina manoloana ny valanaretina COVID-19 Ny ampahany amin’ity valinteny ity dia ahitana ny fananganana sehatra COVID-19 mpamatsy izay tena reharehanay fa anisan’izy ireo.
Tena faly izahay fa afaka nanolotra ny tombony amin’ny zava-niainan’ny Medical Aid International amin’ny tontolo LMIC ho an’ny ekipa Virgin Orbital Ventilator rehefa namolavola ny rivotra izy ireo. Eto ny Lehiben’ny injeniera biomedika, Tony Royston dia hita mihazakazaka fitsapana isan-karazany. Ny mpikambana ao amin’ny ekipa mpanolotsaina anay dia i Dr Roy Miller, mpanolotsaina mpitsabo anay, izay niasa tany Malawi nandritra ny efa-taona tamin’ny naha-consultant Anesthetist ary Tim Beacon, CEO an’ny Medical Aid International ary teo aloha dia Operating Departemanta miasa.
Sarin'ny vokatra fanampiana iraisam-pirenena COVID-19
Topazo maso ny zavatra hafa ataontsika